SAM SMITH နှင့် ADELE တို့ဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုကြံစည်နေတယ် - သတင်း
ဆမ်စမစ်နှင့်အဒဲလ်တို့သည်တူညီသောလူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းပူးပေါင်းကြံစည်မှုရှိသည်
တော်ဝင်မိသားစုတွင် BIG အမဲသား၊ WW3 ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း (ကမ္ဘာကြီးကပ်ရောဂါ) နှင့် ၂၀၂၀ တွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာများအားလုံးသည်ကုန်ခန်းသွားပြီဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ အခုဆိုရင် Sam Smith နဲ့ Adele ကိုပရိတ်သတ်တွေကတ ဦး တည်းတ ဦး တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားမှားသွားမှာပါ။ ငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုနားထောငျ, ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
လင်းယုန်မျက်လုံးပရိတ်သတ်များကသူတို့၏အချက်ကိုသက်သေပြရန်သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင့်လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းအားလုံးကိုသပ်ရပ်သောခေါင်းစဉ်ငယ်များထဲသို့အကျဉ်းချုံးခဲ့သည်။ သငျသညျအကြာတွင်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့ဒီအင်တာနက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏နက်ရှိုင်းသော (စိတ်မကောင်းပါဘူး) နှင့်မှေးမှိန်နက်နဲသောပင်လယ်၌လှိမ့်သွားကြကုန်အံ့ ...
Adele က Sam Smith လိုအတိအကျအသံတွေကိုနှေးစေတယ်
ပန်ကာက Adele ၏ဂန္ထဝင် 'Hello' ကိုနှေးကွေးသောအခါ၎င်းသည်ဆမ်စမစ်နှင့်တူသည်ဟုထောက်ပြပြီးနောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းသီအိုရီကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတွစ်တာတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အကြိမ်ရှစ်သန်းကျော်ကြည့်ခဲ့သောဗီဒီယိုသည်အမှန်ပင်မထင်မှတ်လောက်အောင်ဆိုးဝါးနေသည်။ ဒါဟာ 007 အဘို့အထိုက်အမှုပါပဲ - အရာ, အဆင်ပြေ, သက်သေအထောက်အထား၏နောက်ထပ်အဆင့်မှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏။
သငျသညျ Adele နှေးကွေးသောအခါအမှန်တကယ်က Sam Smith ရဲ့ကြောင်းကိုငါသိသလား pic.twitter.com/SysXOoQgZY
- jesse (@ jesse21valona) ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018
Adele နှင့် Sam Smith တို့နှစ် ဦး စလုံးသည် Sky Bond နှင့် Writing's On The Wall နှင့်အတူဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုတီးမှုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုတော်နှစ် ဦး စလုံးသည်အော်စကာဆု၊ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုများနှင့်ဂရမ်မီဆုများစွာရှိသည်။
တစ်ခုမှာနှလုံးဝေဒနာအကြောင်းနည်းနည်းများလွန်းစွာသီဆိုသောအခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဝေဒနာသည်တစ် ဦး သည်နှလုံးကြေကွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းနည်းအလွန်အမင်းသီဆိုသောဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ သင်ဆိုလိုသည်။
နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ... သူတို့အတူတူအခန်းထဲမှာဘယ်တော့မှနေ!
ဒါကြောင့်ဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတူညီမှုနှင့်အတူသူတို့အတူတကွဓါတ်ပုံရာပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်? အို၊ သီအိုရီကိုအစပြုပြီးနှစ်နှစ်အကြာ၌ပင်မရှိသေးပါ။ Google Sam Smith နှင့် Adele တို့ကိုအတူတကွအသုံးပြုပြီးသင်သည်မျက်နှာပြင်ခွဲခြားထားသောပြင်ဆင်မှုများရာပေါင်းများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ စာသားအရ၊ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က Brits မှာအခန်းထဲကနေထွက်သွားပြီးနောက် ၁၀ စက္ကန့်မှာလမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဝန်ခံရမည်, သင်ဆမ်စမစ်ရဲ့သီချင်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်တဲ့အခါမှာသူက Adele ထက်ပိုပြီး Dolly Parton နဲ့တူတယ်။ ဒါပေမယ့်အလွန်ဖျော်ဖြေမှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျနော်တို့ကလျစ်လျူရှုဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။
- ဟန္န♡ (@notsohugingbear) ဖေဖော်ဝါရီလ 6, 2018
ယေဘုယျအားဖြင့်, ကိစ္စတွင်တော်တော်အားကောင်းနေရှာဖွေနေသည်။ အဆိုပါစားပွဲ, Adele လှည့်ပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ်ငါဆမ်လို့ပြောသင့်သလား Thh, 2020 2020 သွား, သူတို့ပဲအားလုံးကိတ်မုန့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Instagram ပေါ်ရှိ @adele နှင့် @samsmith မှတဆင့်အထူးသဖြင့်ပုံရိပ်။
• Misha B မှ Diana Vickers သို့: X Factor ၏အထင်ကရနောက်ဆုံးဆန်ကာတင်များယခုဘယ်မှာလဲ။
• ပရိသတ်များသည် Britney ၏ TikTok ကို အသုံးပြု၍ သူမအားဓားစာခံဖမ်းထားကြောင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားများလည်းကြီးထွားနေသည်ဟုပြောခဲ့သည်
•နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကခုန်ခြင်းမပါဘဲသင်၏ရည်းစားနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ TikTok လမ်းကြောင်းသစ်ရှိတယ်